Nheyo dzeGoogle Sangana
Kubva Google Sangana, iyo vhidhiyooconferencing sevhisi yakagadzirwa neGoogle, inowanikwa kune vese varidzi veGoogle account uye haichisiri chete kune vanobhadhara nhengo, sevhisi iri kuramba ichikura. Mukudzidzira uku, iwe uchaona maitiro ekudzora ako kutora chikamu, asi zvakare marongero uye maneja ako wega misangano. Iwe unozobva wakwanisa kutora mukana wakazara wezvese zvakanaka zvinopihwa nebasa iri.
Nheyo dzeGoogle Sangana Gumiguru 15th, 2021Tranquillus
VERENGA [BACK TO SCHOOL] - Gadzirira kudzokera kwako kubasa izvozvi!
pashureIzvo zvekutanga zveAptlook pawebhu
zvinoteveraNheyo dzeGoogle Drive
Career kuraira rutsigiro: nyowani Afdas sisitimu ye "yakagadzirirwa-yakagadzirwa" rutsigiro
Zvipo uye mavhoti kuvashandi: iyo 2020 yekuregererwa siringi yakapetwa kaviri